China Plastic ịghaghachi pelletizing akara emepụta na suppliers | FAYGO
Kpọọ anyị: +86 13394191191
Pikwanyere Pipe extrusion Line
Pee / eyi Pipe Extrusin Line
PPR Pipe Extrusion Nweta
Corrugated Pipe Ime Machine
Plastic profaịlụ extrusion Line
Prokwanyere Profaịlụ Extrusion Line
WPC Profaịlụ Extrusion Line
Igwe ahia Pipe
Pipe / Profaịlụ Igwe ikuku
Plastic Fụọnụ Nkedo Machine
Fụọnụ Nkedo Machine
Ọgwụ na ịkpụzi igwe
5 galọn mmiri kalama ndochi igwe
5L 10L Rotary akpaka Bottle ndochi Machine
Igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ
Mmanya Na-ejuputa Igwe
REB COMRPR AKWESKWỌ
Ihu Nkpuchi Ime igwe
Ike akara igwe
Eyi gbazee Fụọnụ Cloth Machine
plastic karama n'olu ịcha igwe
Asambodo Companylọ ọrụ
Plastic imegharị ihe iji pelletizing akara
Nke a akara na-bụ-eji na-eme nsogbu dị iche iche si n'efu plastic ihe, dị ka eyi, Pee, PS, ABS, PA flakes, eyi / Pee fim ihichapụ. Maka ihe dị iche iche, enwere ike ịhazi ahịrị pelletizing a ka ọ bụrụ otu esemokwu extrusion na okpukpu abụọ. Usoro pelletizing nwere ike ịnwụ ihu-pelletizing na noodle-bee pelletizing.
Nke a plastic granulating akara ịmụta akpaka okpomọkụ akara na mụ arụmọrụ. The bi-metal ịghasa na gbọmgbọm dị na pụrụ iche alloy-enye ya ike na ogologo ọrụ ndụ. Ọ bụ akụ na ụba na isi iyi ọkụ eletrik yana mmiri. Nnukwu mmepụta, ogologo ndụ ọrụ na obere mkpọtụ
HDPE anwụrụ extrusion akara
Ikike (n'arọ / awa)
SJ-85 SJ85 / 33 85mm 33 100-150kg / awa
SJ-100 SJ100 / 33 100mm 33 200kg / awa
SJ-120 SJ120 / 33 120mm 33 300kg / awa
SJ-130 SJ130 / 30 130mm 33 450kg / awa
SJ-160 SJ160 / 30 160mm 33 600kg / awa
SJ-180 SJ180 / 30 180mm 33 750-800kg / awa
Nke gara aga: Automatic plastic pet karama olu ọnwụ igwe
Osote: Plastic Crusher Machine
Conical ejima ịghasa extruder
12-575mm6.5mm oké Pee anwụrụ mmepụta akara
PITA karama igwe igwe
Ngwaahịa na-atụ aro
Single ịghasa Plastic Extruder Machine
A na-ejikarị ya eme ihe maka thermoplastics dị ka PE, PP, PS, PVC, ABS, PC, PET na ihe plastik ndị ọzọ. Site na akụrụngwa dị ala (gụnyere ihu), ọ nwere ike ịmepụta ụdị ngwaahịa plastik dị iche iche, dịka ọmụmaatụ ọkpọkọ plastik, profaịlụ, panel, mpempe akwụkwọ, granulu plastik na na.
SJ usoro otu ịghasa extruder nwere uru nke elu mmepụta, magburu onwe plasticization, ala ike oriri, mụ na-agba ọsọ. Gearbox nke otu ịghasa extruder ịmụta elu torque gia igbe, nke nwere atụmatụ nke ala oké ụzụ, elu ebu ikike, ogologo ọrụ ndụ; sccrew na gbọmgbọm jiri ihe 38CrMoAlA, na ọgwụgwọ nitriding; moto ahụ were Siemens ọkọlọtọ moto; onye ntụgharị gbanwere onye ntụgharị ABB; onye na-ahụ maka ọnọdụ okpomọkụ na-ewere Omron / RKC; Igwe eletriki dị ala na-ewere Schneider electrics.
Kinddị ihe ọ beụ carbonụ ihe ọverageụverageụ a na-a carbonụ carbonated na-agwakọta ịsacha, ndochi na ntụgharị ihe ntụgharị n'otu otu. Ọ bụ akụrụngwa na-arụ ọrụ ngwa ngwa ngwa ngwa.
A na-ejikarị ya emepụta HDPE mmiri na-enye mmiri, ọkpọkọ gas. Ọ nwere ike ịme HDPE ọkpọkọ na dayameta site na 16mm ruo 800mm. Na ọtụtụ afọ nke plastic ígwè mmepe na imewe ahụmahụ, a HDPE anwụrụ extrusion akara nwere ihe pụrụ iche Ọdịdị, imewe bụ akwụkwọ, na ngwá dum akara layout ezi uche dị na, akara arụmọrụ bụ pụrụ ịdabere na. Site dị iche iche chọrọ, a HDPE anwụrụ akara nwere ike e mere ka ọtụtụ-oyi akwa anwụrụ extrusion akara.
Ebube na-akpaghị aka na ibudata na-achịkwa ikuku ntinye zuru oke na akpaghị aka. Compressor ga-amalite na akpaghị aka mgbe enweghị nsogbu, ọ ga-akwụsị ịrụ ọrụ mgbe nrụgide jupụtara na ikuku ikuku. Mgbe compressor dị mkpụmkpụ nke ọkụ eletrik, na ọkụ eletrik ga-agbara. Mgbe nrụgide dị oke elu, ọnọdụ okpomọkụ dịkwa elu, nke nwere ike ichebe onwe ya na-akpaghị aka. Nwere ike iji anyị Compressor enweghị ndị ọrụ na ọrụ.
Nke a na-ejuputa mmiri nke na-amịpụta galọn mmiri na-egbu mmiri, nke ụdị ya (b / h) bụ: ụdị 100, ụdị 200, ụdị 300, ụdị 450, ụdị 600, ụdị 900, ụdị 1200 na ụdị 2000.
PERT ala kpo oku anwụrụ
A na-eji ya maka imepụta PP-R, ọkpọkọ PE na dayameta site na 16mm ~ 160mm, ọkpọkọ PE-RT na dayameta site na 16 ~ 32mm. Ejiri akụrụngwa mgbada dị mma, ọ nwekwara ike mepụta paịlị PP-R nke mufti, PP-R fiber fiber pipe, PE-RT na EVOH ọkpọkọ. Na afọ nke ahụmahụ maka plastic pipe extrusion, anyị mepụtara elu na-agba eyi-R / Pee anwụrụ extrusion akara, na max mmepụta ọsọ nwere ike ịbụ 35m / min (isi na 20mm ọkpọkọ).
Okwu: No.8 korea ụlọ ọrụ mpaghara, phoneix obodo, zhang jiagang obodo, jiangsu ógbè, china
Anyị ji obi anyị nile na-atụ anya guzosie ike a mmekọrịta ogologo oge na gị na magburu onwe ya mma na ọrụ ọrụ